Vumela uthole flashlight engcono uma udinga - Liveolight.com
Vumela uthole flashlight engcono uma udinga
I-Lantern ye-LED engenakulinganiswa nge-Remote Control esingaphakamiseli isikhulumi se-bluetooth ephathekayo engenamanzi
Izici zeMkhiqizo: I-1) Inombolo ye-intanethi: I-SCB-1617 2) I-Shell eyinhloko, Umculo ongenazintambo Ukudlala i-3) I-Color LED Flash, i-Colorful Smooth 4) Ukukhanya Okufudumele, Ukuphuma Okuphezulu kwe-Lumens 5) Amahora angu-50 ama-LED Runtime, i-12 ...
I-A7075 i-Aluminium Alloy 500 Lumens IPX7 I-Flashlight engenakwenzeka
♥ Usebenzisa i-CREE XM-L2 T6 LED, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-500 lumens. ♥ Kunikwe amandla yi-1x18650 ithrithri yebhethri futhi ikhokhiswa i-adapter (kokubili kufakiwe). ♥ ukushaja ichweba ...
I-2 ye-Traditional Rechargeable * 18650 Handle ephathekayo 600 Lumens iPx4 Bluetooth Isikhulumi Somlilo weKhente yokuHlola
♥ Isikhulumi se-Bluetooth sinikeza amahora angu-8 wokudlala kwe-wireless engxoxweni eyodwa. Amamodi wesiphakamiso se-lantern ne-bluetooth aklanyelwe ngokukhethekile ukuze wandise ukusebenzisa kwakho izikhathi. ...
Ukunyusa Izindleko Eziphansi 3 * Aaa Amabhethri Isiqeshana Isiqeshana 100 Lumens Isikhathi eside Umsebenzi Cap Ukukhanya For Edc
♥ Usebenzisa i-COB ye-2W, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-100 izibani. ♥ Unikwe amandla yi-3 * AAA amabhethri, nesikhathi eside sokusebenza. ♥ Kufanelekile ekamu, ukugibela, ukuhamba ngebhayisikili, ukugijima nokuningi ...
Uyazi ukuthi ungakhetha kanjani i-flashlight uma uthenga enye?
Eqinisweni, abantu abaningi abazi ukuthi bangakhetha kanjani, Uma uthola futhi uzothenga okungcono. ake ngikutshele ukuthi ungakhetha kanjani uma uthenga.
Okokuqala nje, ibhethri, iningi labantu lingayinaki. Manje kufanele unake.
Amabhethri, kunezinhlobo ezimbili, ibhethri ejwayelekile nebhethri ye-lithium. I-lithium Ibhethri, Nakuba ibhethri evuselelekayo, kodwa ingabi nempilo ende mayelana neminyaka ye-2 futhi okuholwa kuneminyaka engaphezulu kwe-10, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kufanele uthenge ukukhanya kwe-flashlight ene-batsha eyomile.
Okwesibili, kufanele uhlole inkomishi yokucubungula, ikhwalithi yekhwalithi ephezulu ngekhabethe elibushelelezi nelinye elifanayo.
Okwesithathu, ukuvula, uma ushintsha i-flashlight futhi kufanele uhlole ukuvula, ukuma kokuvula kuyisiyingi esivumelwaneni sekhwalithi yekhwalithi ephakeme, futhi ukukhanya kwe-flashlight ye-LED ephansi kunokwabiwa okungafani kwemibala ephuzi neyibhakabhaka.
Ukuthi, hlola ukukhanya. Ikhwalithi yekhwalithi ephezulu inokukhanya okuphezulu nobude obude.
Okwesishiyagalolunye, i-waterproof, high quality flashlight engenamanzi.
Isiphetho, ukubukeka nokubonakalayo. Ukhetha ukubukeka okuthandayo
Kodwa ungcono ukuthenga i-aluminium alloy flashlight.